Esinemthombo Ibanga Mica Powder, Muhle Ibanga Mica Powder, Pearlescent Mica Powder - Huajing
Ikakhulu ihlanganyele ekucubungululeni okuhle kwama-ores angenansimbi, kufaka phakathi i-mica yemvelo, i-mica yokwenziwa, amaminerali asebenzayo, njll.
Ibanga Lezimonyo - I-Natural Muscovite Mica Powder
Ukumboza Ibanga - I-Phlogopite Mica Powder
Ibanga Lesakhiwo Sezimboni - I-Calcined Mica Powder
Ibanga Leplastiki - I-Synthetic Mica Powder
Ibanga Leplastiki - I-Phlogopite Mica Powder
ILingshou Huajing Mica Co., Ltd., esungulwe ngonyaka we-1994, inomlando weminyaka engama-27 kuze kube manje. Kuyibhizinisi elenzelwe ukukhiqiza ikakhulukazi ekucutshungulweni okuningiliziwe kwensimbi engahlanganisi okubandakanya i-mica yemvelo, i-mica yokwenziwa, amaminerali asebenzayo njll.I-Huajing inikeza izixazululo zomhlaba wonke ngokuya ngobuchwepheshe obusebenzayo bamaminerali, izinhlelo zokusebenza eziphezulu, phakathi kwazo lapho ukukhiqizwa kwe-mica kuhlanganisa khona uchungechunge lonke lwekilasi le-powder. Le nkampani ibeke isikhungo sokucwaninga nokuthuthuka emikhakheni ehlukene, okuzohlinzeka ngokusekelwa okuqinile kwezobuchwepheshe kukho konke ukukhiqizwa kwezimboni nezinto zokwenziwa kwezimonyo.
Chofoza ukuze Uphenye
IHuajing ineqembu lobuchwepheshe lamalungu acishe abe yi-100 anikezelwe ekukhiqizeni nasekukhiqizeni imikhiqizo esezingeni eliphakeme evela ku-mica neminye imikhiqizo yezimbiwa.
Le nkampani inamathela isu lekhwalithi ephezulu kanye nentuthuko esimeme futhi ithatha izinto ezintsha zesayensi nezobuchwepheshe njengokuncintisana kwayo okuyisisekelo.
Le nkampani inezikhungo ezimbili ze-R & D emikhakheni ehlukene ukuhlinzeka ngokusekelwa okuqinile kwezobuchwepheshe kokukhiqizwa kwezimboni kanye nezinto eziyisisekelo zezimonyo.
Ekukhiqizeni i-mica yokwenziwa, ukusetshenziswa kwamaminerali asebenzayo kunenzuzo ehamba phambili yezobuchwepheshe.
Izinto zokwakha nokugqoka
Imininingwane yakamuva ngezindaba zethu
IHuajing inamathela kumqondo wohlelo lokuphatha oluthuthukile
Ukuphathwa kwaso kwemboni bekuhambisana ne-ISO9001: 2015 uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi, i-ISO14001: 2015 ...
152021 / Januwari
Iqiniso nge-enviro ...
082020 / Septhemba
Ukuthuthukiswa nokusetshenziswa ...